Depiote Harijaona Randriarimalala : Nanao tatitra tamin’ny vahoakan’Atsimondrano -
AccueilSongandinaDepiote Harijaona Randriarimalala : Nanao tatitra tamin’ny vahoakan’Atsimondrano
Depiote Harijaona Randriarimalala : Nanao tatitra tamin’ny vahoakan’Atsimondrano
02/07/2018 admintriatra Songandina 0
Tanjoka napetraky ny solombavambahoaka Harijaona Randriarimalala izay lany tao amin’ ny distrika Atsimondrano tamin’ny alalan’ny vahoaka nifidy azy, ny asa izay notanterahiny sy ireo lalàna nofidiana teo anivon’ny Antenimieram-pirenena, izay tokony hiantraika amin’ ny vahoaka, ary nambarany fa tafiditra indrindra amin’ ny asan’ny parlemantera izany. Nandritra ny tatitra izay notanterahiny teny Avarabohitra Itaosy dia samy nanongilan-tsofina nihaino ity solontenan’izy ireo eny Tsimbazaza ity ny mpifidy azy. Tonga maro noho izany ireo vahoaka nihaino ny tatitra, ary tamin’ izany no nanindrian’ny solombavambahoaka Harijaona Randriarimalala fa ireo solombavambahoaka rehetra teny amin’ ny Antenimieram-pirenena, indrindra ireo depiote manohana ny fitondrana dia nifidy ny volavolan-dalàna nasim-panitsiana avokoa, « zava-dehibe ho an’ny firenena ny nahalany iny lalàna momba ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana izay nofidiana farany iny, satria dia hiankinan’ny fifidianana filohan’ny repoblika izay atrehina amin’ ity taona ity. Iny lalàna iny ihany koa dia hiantoka tanteraka ny filaminana izay tena ilaina mandritra ny fotoanan’ny fifidianana » hoy hatrany ny depiote Harijaona Randriarimalala.
Tsy azo lavina tokoa ny nambaran’ny solombavambahoaka lany tao Atsimondrano, Harijaona Randriarimalala io, satria dia hita ny fampitomboana ny tetibolan’ireo mpitandro filaminana izay hiady mafy amin’ny fametrahana ny fandriam-pahalemana eto amin’ny firenena mandritra ny fifidianana. Izay indrindra no somary nanaovan’ny depiote Harijaona Randriarimalala fanontaniana miaro tsindrim-paingotra kely ho an’ ny TIM izay tsy nandany ny tetibola nasiam-panitsiana. Fa nandritra ny tatitra izay nataony tamin’ ny vahoaka ihany no nanindrian’ny solombavambahoaka Harijaona Randriarimalala fa mitohy hatrany ny fanohanany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ireo asa fampandrosoana tanterahiny isan-karazany eto amin’ ny firenena. “Ny fametraham-pialako eo anivon’ ny vondrona parlemantera HVM dia raharahan’antoko ihany, saingy mitohy hatrany kosa ny fanohanako ny filoham-pirenena” hoy hatrany ny fanazavana izay nentiny, izay nampiany hoe “ mino ihany koa ao fa ho kandida ary hirotsaka hofidiana hatrany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Hita sy tazana ao aminy mantsy ny faniriana ny hampisondrotra hatrany ny firenena, indrindra amin’ny lafin’ny fampandrosoana”.
Araka ny fanamarihana izay nentin’ny solombavambahoaka Harijaona Randriarimalala dia efa nisy ny fampihavanana izay nataony tamin’ ireo depiote, izay nisy olana taminy teo anivon’ny antenimieram-pirenena.
Manadio tena mafy amin’ny resaka fanondranana « bois de rose » i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga ary nilaza mihitsy fa niady tamin’izany nandritra ny Tetezamita. Tena nanondrana andramena tokoa i Andry Rajoelina izay tompon’ny ...Tohiny
Fotodrafitrasa maharitra : Hoentina hanatsarana ny fiainam-bahoaka
Mpanao politika nampiady vahoaka : Mahay mihavana hatrany
Zandarimariam-pirenena : Nitohy tany Betsiaka Ambilobe ny fidinana ifotony